Sebekhuluma ngayo ingakafiki i-X1 | Isolezwe
Sebekhuluma ngayo ingakafiki i-X1
Isolezwe / 12 July 2012, 12:21pm /
IZOBUKEKA kanje|i-BMW X1 ezotheleka kuleli ngoSepthemba. Abathandi bale moto sebeqalile ukukhuluma ngayo ezinkundleni zokuxhumana
NAKUBA sike sakusho ukuthi izoqala ukudayiswa kuleli ngoSepthemba kuwo lo nyaka i- BMW X1 entsha kodwa abantu abangabathandi balezi zimoto sebeqalile ukuxoxa nangayo ezinkundleni zokuxhumana. Kubonakala izothi ifika nje le -X1 ibe isidayiswa okwamagwinya ashisayo emakethe.
Kubantu asebeke baphawula ngayo ezinkundleni zokuxhumana bagxeka ukuthi uhlobo oluzotholakala kuleli angeke lube nabo ubuchwepheshe beReal Time Traffic Alert Information lapho uthola lonke ulwazi lwezemigwaqo okuhlanganisa isiminyaminya sezimoto, izingozi nokunye okungakukhipha ekukhulumeni.
Ngaphandle nje kwalobu buchwepheshe le X1 izophuma nazo zonke izinto ezizotholakala kwamanye ama-X1 azodayiswa emazweni omhlaba njenge Automatic/Advanced Emergency Call function ekwazi ukubona lapho imoto isuke ikhona. Isezingeni lesimanje ngobuchwephe njengoba labo abakwi-facebook ne-twitter bengakwazi ukusebenzisa lezi zinkundla zokuxhumana khona emotweni kanti i-navigation system yakhona iyakwazi nokuthi ixhume i-internet.
Ibingekho enye indlela ebengingangenisa ngayo nge X1 ngaphandle kokugxila kwezobuchwepheshe ngoba akuyona imoto entsha emakethe.
Izinjini zayo zihlukene kukhona ezintathu ezisebenzisa upetrol kanye nezinhlanu ezisebenzisa udizili. Amandla kulezi zinjini asukela ku 85kw aze afinyelele ku 180kW. Kuzoba ngokokuqala ukuthi kwa-BMW bakhiphe imoto esesigabeni esiphansi kodwa okungelula ukuthi uyibone kulezi zinhlobo okuyi-BMW x Line. Zonke izinhlobo ze X1 ziyi Sporty ngemuva nangaphambili, kanti ngemuva uma uzoqaphela kuma X1 angaphambili bekugqame kakhulu umbala omnyama ohlukile kowemoto kodwa manje sezigqize ngombala ofanayo.
Ngaphakathi kuyabonakala ukuthi bazinike isikhathi kwa BMW beyihlanganisa. Indlela unqenqema oluphakathi komshayeli nephasenja (olubizwa nge-centre console) abalwenze ngayo ingichazile.
Balwenze ngendlela yokuthi zonke izinto zikwazi ukubhekana ngqo nomshayeli okuyisitayela sakwa-Alfa Romeo, kanti nakwa-BMW bayaziwa ngaso kakhulu kuma “gusheshe”.
Akukholakali ukuthi i-X1 esesigabeni esiphansi inenjini engu 2.0 litre, isebenzisa u-petrol namandla enjini afinyelela ku 110kW ne-torque engu 200Nm.
Ngemizuzwana engu 9,7 iyakwazi ukwenza u-100km/h. Ayiyimbi neze ku-petrol ngoba ngokusho kwabakwa-BMW isebenzisa amalitha angu 7.7 ngebanga lika 100km.